ဟားခါးမြို့တွင် တိုင်ကြားခံရသည့် မြေကွက်ရောင်းသူများအမှု အချိန်ကြာ စိစစ်ရမည်ဟုဆို - Chin World
Home Chin ဟားခါးမြို့တွင် တိုင်ကြားခံရသည့် မြေကွက်ရောင်းသူများအမှု အချိန်ကြာ စိစစ်ရမည်ဟုဆို
ဟားခါးမြို့တွင် အစိုးရမှ ဆောင်ရွက်နေသည့် မြို့ပြစီမံကိန်းအတွင်း မြေအရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်ခဲ့သူများ ဟုယူဆရသည့် (၆)ဦးကို ပြည်သူပိုင် ပစ္စည်း အလွဲစားသုံးမူ ပုပ်မ ၆(၁)ဖြင့် ဟားခါးမြို့မ ရဲစခန်းမှ အဖွင့်ထားကြောင်း စခန်းမှူး သိန်းဇော်ဦးက ပြောသည်။
စခန်းမှူး ဦးသိန်းဇော်ဦးက “အဲလိုရောင်းချတဲ့သူတွေ ခြောက်ဦးကိုတော့ ပြည်သူပိုင် ၆(၁)ပုဒ်မနဲ့ အမူဖွင့်ထားတယ် အသေးစိတ်တော့ မလုပ်ရသေးဘူး။ အမှုလာဖွင့်ထားလို့ စစ်ဆေးနေဆဲ ကာလဖြစ်တယ်။ လူတော်တော်များများ စစ်ဆေးရဦးမှာဆိုတော့ အချိန်တော့ ယူရဦးမယ်”ဟုပြောသည်။
ဟားခါးမြိှု့ မြို့ပြစီမံကိန်းအတွင်း မြေအရောင်းဝယ် လုပ်သူများဟု ယူဆပြီး အဖမ်းဆီးခံရသူများသည် Pu Zung Mang၊ Pu Bawi Awr၊ Pu Chan Thleng၊ Rev. Dr Hrang kil၊ Pu Hmet Al နှင့် Pi Ngun Par တို့ဖြစ်ကြကြောင်း သိရှိရသည်။
ဟားခါးမြို့ မြို့ပြစီမံကိန်း စည်ပင်ဧရိယာ ဧက ၆၇၆ တွင် ရှိသည့် အိမ်များကို သြဂုတ်လ(၂၀)ရက်နေ့တွင် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရမှ ကျူးကျော်အိမ်များဟု သတ်မှတ်ကာ စက်ကြီးများနှင့် ဖျက်စီးခဲ့ပြီး ၎င်း ၆၇၆ဧကတွင် အစိုးရမှ အကွက်ပေါင်း (၇၁၇)ကွက်ဖော်ပြီး အစိုးရနေဖြင့် ရောင်းချရန်ပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်။
အဆိုပါ မြို့ပြစီမံကိန်းအတွင်း မြေကွက်ဝယ်လိုသူများမှ မြေကွက်ဝယ်ယူရန် အစိုးရတွင် လျှောက်လွှာများတင်ကာ ဝယ်ယူကြရမည်ဖြစ်ပြီး မြေကွက်ရောင်းချမူမှရရှိသော ငွေကြေးဖြင့် လမ်းများပြုပြင်ရာတွင် အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ဟားခါးမွို့တှငျ တိုငျကွားခံရသညျ့ မွကှေကျရောငျးသူမြားအမှု အခြိနျကွာ စိစဈရမညျဟုဆို
ဟားခါးမွို့တှငျ အစိုးရမှ ဆောငျရှကျနသေညျ့ မွို့ပွစီမံကိနျးအတှငျး မွအေရောငျးအဝယျ ပွုလုပျခဲ့သူမြား ဟုယူဆရသညျ့ (၆)ဦးကို ပွညျသူပိုငျ ပစ်စညျး အလှဲစားသုံးမူ ပုပျမ ၆(၁)ဖွငျ့ ဟားခါးမွို့မ ရဲစခနျးမှ အဖှငျ့ထားကွောငျး စခနျးမှူး သိနျးဇျောဦးက ပွောသညျ။
စခနျးမှူး ဦးသိနျးဇျောဦးက “အဲလိုရောငျးခတြဲ့သူတှေ ခွောကျဦးကိုတော့ ပွညျသူပိုငျ ၆(၁)ပုဒျမနဲ့ အမူဖှငျ့ထားတယျ အသေးစိတျတော့ မလုပျရသေးဘူး။ အမှုလာဖှငျ့ထားလို့ စဈဆေးနဆေဲ ကာလဖွဈတယျ။ လူတျောတျောမြားမြား စဈဆေးရဦးမှာဆိုတော့ အခြိနျတော့ ယူရဦးမယျ”ဟုပွောသညျ။
ဟားခါးမွိှု့ မွို့ပွစီမံကိနျးအတှငျး မွအေရောငျးဝယျ လုပျသူမြားဟု ယူဆပွီး အဖမျးဆီးခံရသူမြားသညျ Pu Zung Mang၊ Pu Bawi Awr၊ Pu Chan Thleng၊ Rev. Dr Hrang kil၊ Pu Hmet Al နှငျ့ Pi Ngun Par တို့ဖွဈကွကွောငျး သိရှိရသညျ။
ဟားခါးမွို့ မွို့ပွစီမံကိနျး စညျပငျဧရိယာ ဧက ၆၇၆ တှငျ ရှိသညျ့ အိမျမြားကို သွဂုတျလ(၂၀)ရကျနတှေ့ငျ ခငျြးပွညျနယျအစိုးရမှ ကြူးကြျောအိမျမြားဟု သတျမှတျကာ စကျကွီးမြားနှငျ့ ဖကျြစီးခဲ့ပွီး ၎င်းငျး ၆၇၆ဧကတှငျ အစိုးရမှ အကှကျပေါငျး (၇၁၇)ကှကျဖျောပွီး အစိုးရနဖွေငျ့ ရောငျးခရြနျပွငျဆငျလကျြရှိသညျ။
အဆိုပါ မွို့ပွစီမံကိနျးအတှငျး မွကှေကျဝယျလိုသူမြားမှ မွကှေကျဝယျယူရနျ အစိုးရတှငျ လြှောကျလှာမြားတငျကာ ဝယျယူကွရမညျဖွဈပွီး မွကှေကျရောငျးခမြူမှရရှိသော ငှကွေေးဖွငျ့ လမျးမြားပွုပွငျရာတှငျ အသုံးပွုသှားမှာဖွဈကွောငျးလညျး သိရသညျ။
Previous post ချင်း Multi Dictionary ထုတ်နိုင်ရန် တူညီသည့် စကားလုံး၁၅၀၀ ခန့်ရွေးထားပြီဟုဆို
Next post ချင်းတိုင်းရင်းသား တစ်ဦး နေအိမ်တွင် ဓားခုတ်အသတ်ခံရ
ဟားခါးပွညျသူ့ဆေးရုံတှငျ ထားရှိလကျြရှိသော COVID-19 လူနာဆေးရုံဆငျးရနျပွငျဆငျလကျြရှိ
ချင်းပြည်နယ်သို့ရောက်ရှိနေသည့် အိန္ဒိယသံအမတ်ကြီးမှ ရိဒ်နယ်စပ်ဈေးနှင့် နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးတံတားတည်ဆောက်မည့် မြေနေရာအားစစ်ဆေးခဲ့